Ogaden News Agency (ONA) – Zenawi Waxaa uu lamid yahay Mubarak- Caalamka oo kadoodaya taliska Zenawi-
Zenawi Waxaa uu lamid yahay Mubarak- Caalamka oo kadoodaya taliska Zenawi-
China oo Eedeysay Ethiopia> Caalamka oo ka hadlaya Qaabka Ethiopia u maamulayso Ethiopia. Warbixintii Ururka Royal African Society how Zenawi Rules Ethiopia.
Caalamka ayaa kadoodaya kaligi taliye Zenawi iyo xukunkiisa qalafsan ee uu ku heysto Ethiopia. Waxaa hadaba Gudomiyaha Ururka Royal Africa Society oo ah Urur u ololeeya arrimaha Africa oo ka dhisan wadanka UK uu bilaabay in ay baadhitaan ku sameyaan xukunka Males Zenawi iyo qaabka uu u maamulo Ethiopia. Richard Downson oo ah gudoonka ururkan ayaa wareysi dheer la yeeshay Ra isalwasaaraha Ethiopia 12 Bishii May 2012. Waxaa hadaba markale lasoo shaaciyay warbixin aad u dheer oo looga hadlayo “How Meles Rules Ethiopia”.
Warbixintan iyo wareysigii Richard Downson uu la yeeshay Zenawi ayaa hadaba faalo kooban kasameyn doona:
Raisalwasaaraha Ethiopia ayaa ah marka uu la hadlayo wadamada ree galbeedka Ra’isal Wasaaraha Afrika ugu xariifsan ee wax lala wadaagi karo. Balse waxa uu leeyahay waji kale marka uu la dhaqmayo dadkiisa iyo wadankiisa Ethiopia. Markuu lahadlayo dadkiisa Ethiopia Waa nin aad u cadaadiya dadkiis oo lafahmi karin waxuu galo iyo waxuu gayo toona. Waxuuna aad ugu guuleystay innuu ruwaayado iyo madadaalo u dhigo wadamada ree galbeedka isaga oo cabudhinaya islamarkaasna cadaadinaya dadkiisa. Waxuu ku guuleystay in ree galbeedka uu jeediyo waxuuna ka bad baaday faragalinta wadamada ree galbeedka taas oo u saamaxday in wadankiisa uu sii xukumo.
Waxaa loo doortay innuu kamid noqdo 4 madax oo Afrikan ah oo lagu soo casuumay shirkii Camp David. Waxaa loo arkaa innuu yahay nin ka horeeya madaxda Afrikada kale oo uu yahay nin gaadhsiin kara hindisaha Milenium development ethiopia. Dowlada Ethiopia ayaa dowlad Qarniyo soo jirtay sidaas awgeed waxay heshaa mucaawamo xad dhaaf ah oo sida wabiga ugufataha dowlada Ethiopia iyada oo sanad kasta qaadata lacag gaadhaysa 4 billion oo Dollar.
Males Zenawi waa Poliska USA u qaabilsan Afrika, waxaa ciidamada Ethiopia loo diray Somalia iyo Sudan iyaga oo wakiil ka ah Mareykanka. Waxa uu ka faa ideystay cadaawada dhextaal isaga iyo Madaxweyanaha Eritrea oo mareykanku u arkaan inuusan danaha mareykanka kasoo horjeedo.
Zenawi Waxa uu la nooc yahay Mubarak, nin kamid ah siyaasiyiinta USA ayaa u sheegay ARS in dowlada USA ay Mubaarak kala hadli jireen kaliya saameynta ay Masar ku leedahay Gobolada dariska la ah waligoodna aysan kala hadlin siyaasada daakhiliga ee gudaha Masar. Sidaas awgeed Zenawi waxaa laga gubi doona cudurkii Mubaarak.
Ethiopia 2005 waxaa ka dhacay Doorasho midas oo mucaaradku sheegtay inay ku guuleysteen Addis Ababa iyo Gobolada Ethiopia. Waxaana taliska Zenawi ay xidheen gudomiyihi mucaradka iyaga oo ku xukumay khaayim wadan. Eega wadanka ethiopia 99.6% waxaa codka doorashada sheegtay inay ku guuleysteen xisbiga EPRDF taas oo ka dhigaysa wadanka Ethiopia Wadan uu maamulo hal Xisbi. Raisal wasaaraha Ethiopia uu uu la yeeshay ninka qoraalkan diyaariyay ayaa sheegay in Zenawi uu weydiiyay majiraan tuulo ama daabiyad u codeysay xisbiga mucaaradka. Zenawi waxa uu sheegay inuusan garanba karin meel cod laga siiyay mucaradka hal tuulana ha ahaate.
Dadka Ree Ethiopia ayaa waxa amar lagu siiyay oo sandulle ku noqday Hadii aad Xisbiga EPRDF taageerto Waxaad heli waxbarasho, biyo, cafimaad, dhul iyo shaqo. Hadii aad dowlada ka hor timaado waxba heli maysid. Waxaakale oo xuquuqdi siyaasiga aheyd ee sharciga Ethiopia ku qornaa baa bi’yay innuu horgalo wakaalado kamid ah xafiisyada taliska Ethiopia oo ma jiraan wax xuquuq ah oo Political Rights ah. Sidoo kale waxaa la mamnuucay saxaafada wadanka oo dhamaan wargeysyada Ethiopia waxaa amar dowladu ku bixisay in saxaafad kastaba mulkiilihiisu uu masuul ka noqdo erey kasta oo ku soo baxaa saxaafadiisa. Waxii dowladu aysan ku faraxsanayna innuu sharci darro yahay. Waxaa kaliya oo wadanka Ethiopia wax daawaci kara waxaa weeye saxaafada ay taliska EPRDF leedahay ee dowliga ah.
Mudadii uu qabsaday xilka Males Zenawi lagasoo bilaabo 1991 illaa hada waxa uu layimid xirfad ah inuu canshuur yar ka qaado maalgashayaasha shisheeye oo ka kooban wadamada ree galbeedka iyo Asia. waxana horumarka ethiopia ee ganacsigu kor u kacay illaa inta u dhaxeysa 8-11. Waxaa uu isku dayaya Zenawi innuu wadanka horumar dag dag ah gaadhsiiyo isaga oo isticmaalaya nidaamka Shuuciga China. Waxa uu dhulka Ethiopia ka gaday shirkado shisheeye oo kasoo jeeda wadamo kale. waxa uuna hadda durba gaday dhul gaadhaya 4 million oo hectar oo dhul ah si shirkado ay u beertaan.
Males waxa uu ku howlanyahay inuu dhiso biyo xidheeno uu ka dhaliyo dab si beerahaas uu ka gadayo shirkadaha loogu helo waraab iyo waxyaalaha ay u baahanyihiin. Ganacsiga iyo suuqa ethiopia maahan mid xor ah waxaa banigiyada iyo isgaadhsiintaba gacanta ku haya xisbiga talada haya ee EPRDF. Dadkana lama siiyo lahaanshaha dhulka oo waxaa dhulka iska leh dowlada. Waxuuna Males balan qaaday inay sidaas ahaan doonto waligiis intuu joogo.
Hadaba Taliska Zenawi waxaa lagu eedeyay oo lagu cadeyay haayadaha xuquuqul insaanka iyo haayadaha ree galbeedkaba lagu sheegay in dhulka dadkii dagana la xasuuqay oo xoog looga kiciyay.
Sidoo kale waxaa Zenawi laweydiiyay dhulka Ogadeniya ciidamadiisa ku sugan ee xasuuqa ka geysanaya. waxa uuna ku jawaabay in dhulkaas uu ka dhisay ciidamo somali ah oo uu hub siiyo si ay ula dagalamaan ONLF. sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ONLF ay ka daggalamaan dhulkaas. Zenawi ayaa sheegay innuu damac weyn ka leeyahay Ogadeniya waxa uuna sheegay in damaciisa ay Ciidamada ONLF ay hortaganyihiin.
Hadaba markii ugu horeysay ayaa waxaa kusoo kordhay Ethiopia eedeymo uga yimaada Wadanka China. China ayaa ku tilmaamtay Ethiopia qaabka ay ku socoto qaab nidaam daran, mana ku dayan karaan nidaamkii ay China heerkeeda kusoo gaadhay. Waxaan uga digaynaa Zenawi qorshahan xun. Ethiopia fursad fiican ayaa ay leedahay waxayna u baahantahay in qorshahan Zenawi mid ka gadisan oo qurux badan loo dajiiyo Ethiopia. Waxaa sidaas laga sheegay shirkii China Forum ee ka dhacay magaalada Addis Ababa.
Zenaawi waxaa uu kusoo dhacay jidgooyo furumo badan lagasoo weeraray. Taas oo Horumarkan uu sheegayo uusan xalin karin dhibaatadiisa. nolosha Ethiopia aad ayay u adagtahay waxaana korka jooga miciinshada raashinka, danyarta Ethiopia ayaa aad u tabaaleysan, ardeyda Jaamacadaha soo qalin jabinaysa ayaa aad u tiro badan mana jiraan shaqooyin ay heli doonaan. Gabadh kamid ah dadkii soo qalin jabisay sanadkii dhowaa ayaa tiri 100 arday oo aan isku fasal aheyn waxaan shaqo ku helnay kaliya 10 arday kaliya. Taas miyaa horumarinta Ethiopia la rabo in si dag dag ah lagu gaadho. Zenawi ayaa daaqado badan garaacaya oo kamid tahay birta Maarta in lagasoo qodo dhulka waxa uuna sheegay dhowaan in Saliida Ogadeniya lasoo saari doono.
Waxaa uu la kulmayo Zenawi ayaa ah mid aynu wada garanayno oo ah in maciishadu kor u kacdo, nolosha Ethiopia aad u adkaato, dad badan oo Jaamiciyiin ah ay wayaan shaqo. Dhalinyarada Ethiopia ay usoo baxaan suuqyada. Waxa ku xigana waa midaynu niqiinay oo ah? Kacdoonkii Carabta…Dadka Ethiopia waxay aad ula socdeen kacdoonki Carabta xog badana way ka heystaan sidii uu ku qabsoomay iyo taariikhdiisa. Waxaa hadda soo uraysa caraftii dhamaadkii Zenawi oo isna ah mid uu ka warhayo. Waxa uuna u sheegay shirkii The World Econimic Forum in waxii soconaya uu socon waxii tagina uu tagi- waxaa la jooga waqtigii Ethiopia ay yeelan laheyd Hoggaamiye adag oo odhan kara waan diiday. qofkasta mala qancin karo.
Zenawi : “The going is going to get tough so Ethiopia needs a tough leader, a leader prepared to say no. You can’t please everyone.”
Akhristow imisa hoggaamiye oo carab ah ayaa yiri NO- waan diiday halkeyse ku danbeysay. Soo lama hallaagin kuwii horeyay iyo kuwi ku xigay oo haddana cidhib xumo u danbeyn meyso kuwa diidan ee Zanawi oo kale ah.